ဝါ၀ါ: Taipei zoo သို့အလည်တခေါက်
Taipei zoo သို့အလည်တခေါက်
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေက တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ် သို့အလည်တခေါက်ရှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်..လက်မှတ်က အလကားရလို့ ... လူကြီး နှစ်ယောက် လက်မှတ် နှင့် ကလေးလက်မှတ် နှစ်စောင်ပါ.. ပြီးတော့ အထဲမှာ ၀ယ်စားဖို့ ၂၀၀ လဲပေးပါတယ်.. တခြားနှစ်ယောက်က မသွားလို့ ၀ါဝါကို ပေးလိုက်တော့ လက်မှတ်တွေက အများကြီးပဲ.. ၀ယ်စားလို့လဲ အများကြီး ရသွားတယ်လေ... ခုတောင် လက်မှတ် ကျန်သေးတယ်.. လကုန်ထိပဲသွားလို့ရပါတယ်. ..
အရင်တုန်းက သွားတုန်း ကမြေအောက်ရထား စီးသွားတယ်လေ.. စနေ နှင့် တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက် မြေအောက်ရထား ပြင်နေလို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားပါတယ်... ဆိုင်ကယ် နှင့် သွားတာ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်.. အလွန်ဆုံး နာရီဝက် ဆိုရောက်ပါတယ်.. မြေအောက်ရထားဆို တနာရီကျော်လောက် ကြာပါတယ်.. နှစ်ခါလောက် ပြောင်းစီးရပါတယ်.. ဟိုရောက်တော့ ၉နာရီရှိပါပြီ.. ၉နာရီစဖွင့် တာ.. လူမရှိဘူးထင်နေတာ လူတွေအများကြီးပဲ...ကလေးတွေလဲ ကျောင်းနှစ်လပိတ်ထားတော့ ကလေးတွေလဲ အများကြီးပဲ...
၀င်ဝင်ချင်းမှာပဲ Panda bear ကိုကြည့်ဖို့ လက်မှတ်ပေးပါတယ်.. ၉နာရီ ၄၀ မှဆိုတော့ Koala ကိုအရင် သွားကြည့် တယ်. တကောင်ပဲ တွေ့တယ်..အိပ်နေလို့ အပြင်က ပို့စတာ ကိုပဲရိုက်လာတော့တယ်... ချစ်စရာလေးနော်..
ဘယ်ဘက်ကို ဆက်လျှောက်သွားတော့ Parrot အရောင်စုံလေးတွေကို သွားကြည့်တယ်... အရောင်သုံး မျိုးတွေ့ရပါတယ်...၀ါ စိမ်း ပြာ သုံးကောင်လေ..
ဘေးနား မှာ Pony Horse လဲရှိတယ်လေ.....
အောက်ကပုံက Linnaeus's Two-toed Sloth လို့ခေါ်ပါတယ်... တရက်ကို ၁၅နာရီလောက် အိပ်ပါတယ်.. ထလာလို့ ရှိရင် လဲ လှုပ်ရှားမှု လဲနည်းတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်.. ကြည့်ပြီးထွက်လာတော့ ၉နာရီ ခွဲသွားပါပြီ... Panda bear ကိုသွားကြည့် ဖို့အချိန်က နီးလာပြီး ဆိုတော့ တန်းမြန်မြန် သွားစီပါတယ်..
Panda bear နှစ်ကောင်ကို တရုတ်ပြည်က လက်ဆောင် ပေးထားတာလေ.. တရုတ်နှစ်သစ် ကူးခါနီး ကပေါ့ .. သွားကြည့်တဲ့ လူတွေဆိုအများကြီးပဲ.. လူဦးရေ ကလဲ ကန့်သတ်ထားတယ်လေ... အဲဒီတုန်းက ဆို လူတွေများမှများ သတင်းမှာ အမြဲ ပြတယ်....အောက်ကပုံကတော့ အ၀င်ဝမှာပါ..
ထွမ်ထွမ် ရွမ်ရွမ် လို့ခေါ်ပါတယ်.. မြန်မာလို့ အဓိပ္ပာယ် ပြန်မယ်ဆိုရင် စည်းစည်းလုံးလုံး လို့အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်..
လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပါ.. လည်ပင်မှာပတ်ထားတဲ အပြာနဲ့ အနီမှာ နာမည်လေးတွေရေးထားပါတယ်... တကောင် ကို ၄၉၉ ပါ....ကြိုက်တာလေးတွေ ယူသွားလို့ရတယ်နော်....
ကားကို ရထားပုံစံ လုပ်ထားတယ်.. ပုံစံအမျိုးမျိုးပဲ..ရထားခေါင်းကိုမရိုက်မိလို့ ထိုင်နေတဲ့နေရာကနေ ရိုက်လိုက်ရပါတယ်.....
Pigeon လေးတွေ ကိုအစာကျွှေးနေပါတယ်...အကောင်ရေတွေလဲ နည်းလာသလိုပဲ.. အရင်တုန်းက လာကြည့် တုန်းက အများကြီးပဲ.. အစာကျွှေးနေတော့ ရေထဲကို ဆင်းလဲမဆင်း ဘူး..ရေကူးနေ ရင်ကြည့်လို့ပိုကောင်းတယ်လေ...
အပြင်ပြန်ရောက်လာတော့ M (i'm lovin' it) မှာ hamburger ၀ယ်စားတယ်..လူတွေအများကြီးပဲ.. ထိုင်ဖို့ နေရာမရှိတော့ဘူး.. စင်ရှေ့ မှာခုံတွေချထားလို့ အဲဒီမှာ သွားထိုင်စား ပြီးပြန်လာကြတယ်လေ...ဘိုင်ဘိုင်....
Posted by မီမီဝါ at 12:27 AM
Labels: အမှတ်တရ, အလည်အပတ်
ကျွန်တော်တို့လည်း သွားမယ် သွားမယ်နဲ့
ဒီတပါတော့ သွားဖြစ်အောင် သွားအုံးမှပဲ
မိုးရွာရင်တော့ သွားလို့မကောင်းဘူ မ၀ါရေ...
ထွမ်ထွမ်ရွမ်ရွမ်= စည်းစည်းလုံးလုံး ;)
LeoFoo village သို့အလည်တခေါက်
မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ အသင်းဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်
ဤနေရာအောက်တွင်နှိပ်ပါ မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်Weekly Eleven ဂျာနယ်မဇ္ဈိမဒီဗွီဘီဧရာဝတီခေတ်ပြိုင်အာအက်ဖ်အေ
ဤနေရာအောက်တွင်နှိပ်ပါ ဖလက်ရ်ှဘင်းမြန်မာ အမ်ပီသရီးပန်းစကား တေးသီးချင်းမဉ္ဇူရီအင်းဝ ရွှေအိမ်မက်တော်ဝင်သဇင်မြန်မာ ဗွီစီဒီများခရမ်းပြာ အခမဲ့ ဗွီဒီယိုမြန်မာ ပုံရိပ် ကာရာအိုကေ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ လာလည်ကြသော ချစ်မိတ်ဆွေများ